Rwiyo rwaDhavhidhi. 143 Haiwa Jehovha, inzwai munyengetero wangu;+Teererai kuteterera kwangu kuti ndibatsirwe. Ndipindurei mukutendeka kwenyu uye mukururama kwenyu. 2 Musatonga mushumiri wenyu,Nekuti hapana munhu mupenyu anogona kuva akarurama pamberi penyu.+ 3 Nekuti muvengi ari kundidzingirira;*Andipwanyira pasi. Akaita kuti ndigare murima sevaya vakafa kare kare. 4 Simba rangu riri kupera;+Mwoyo wangu wakarukutika mukati mangu.+ 5 Ndinoyeuka mazuva ekare;Ndinofungisisa mabasa enyu ese;+Ndinonyatsofungisisa* mabasa emaoko enyu. 6 Ndinotambanudzira maoko angu kwamuri;Ndine* nyota yekuva nemi senyika yakaoma iri kuda mvura.+ (Sera) 7 Kurumidzai kundipindura, haiwa Jehovha;+Simba rangu rapera.+ Musandivanzira chiso chenyu,+Nekuti ndinozofanana nevaya vari kudzika kugomba.*+ 8 Itai kuti mangwanani ndinzwe rudo rwenyu rusingachinji,Nekuti ndinovimba nemi. Ndizivisei nzira yandinofanira kufamba nayo,+Nekuti ndinotendeukira kwamuri. 9 Ndinunureiwo pavavengi vangu, Jehovha. Ndiri kutsvaga kudzivirirwa nemi.+ 10 Ndidzidzisei kuita kuda kwenyu,+Nekuti ndimi Mwari wangu. Mweya wenyu wakanaka;Ngaunditungamirire panzvimbo yakati sandara.* 11 Ndichengetedzeiwo ndiri mupenyu, Jehovha, nekuda kwezita renyu. Mukururama kwenyu, ndinunurei* pakutambudzika.+ 12 Nerudo rwenyu rusingachinji, nyararidzai vavengi vangu;+Paradzai vese vari kundishungurudza,*+Nekuti ndiri mushumiri wenyu.+
^ Kana kuti “kudzingirira mweya wangu.”
^ Kana kuti “Ndinonyatsodzidza.”
^ Kana kuti “munyika yekururama.”
^ Kana kuti “kushungurudza mweya wangu.”